Ahoana ny fampiasana ny zoom amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Manohy ny andiany ny fika sy torohevitra hitondra ny fampisehoana farany ambony indrindra amin'ny Apple Watch ary amin'ity indray mitoraka ity dia ataontsika amin'ny iray amin'ireo fiasa izay azontsika ekena ho MAHASOA, noho izany, miaraka amin'ny litera lehibe, raha oharina amin'ny haben'ny fiambenana famantaranandro, ny Zoom, izay azontsika antoka fa hampiasa be dia be ary noho izany dia hampavitrika antsika izy io, halamina ary hianarantsika ny fampiasana azy.
1 Mampavitrika ny zoom an'ny Apple Watch
1.1 Ao amin'ny Apple Watch
1.2 Avy amin'ny app Apple Watch amin'ny iPhone-nao
2 Ahoana ny fomba hanatsarana ny Apple Watch
Mampavitrika ny zoom an'ny Apple Watch
Para mampihetsika zoom Azontsika atao amin'ny fomba roa na tsara kokoa, avy amin'ny toerana roa, hahafahanao misafidy ilay tianao indrindra.
Ao amin'ny Apple Watch
Ampidiro ny zoom avy amin'ny Apple Watch mihitsy Iray amin'ireo zavatra tsotra indrindra izy io, araho fotsiny ny lalana Fikirakirana → Ankapobeny → Azo idirana → Zoom ary ampiasaintsika izy io:
Avy amin'ny app Apple Watch amin'ny iPhone-nao
Raha mora ny fomba teo aloha dia tsy nolazaiko anao akory ny tsotra nataony ampandehano ny zoom an'ny Apple Watch avy amin'ny iPhone. Amin'ny ankapobeny dia mitovy ny fizotrany: sokafy ny fampiharana Apple Watch amin'ny iPhoneo ary araho ny lalana → Fidirana → Fizarana zotra, ampiasainay izany ary hofaritana ny ambaratongan'ny zoro tianay hatao rehefa ampiasainay io asa io (zavatra iray tena Apple Watch tsy afaka nanamboatra izany izahay raha nanao izany avy amin'ny iPhone dia ho tsotra nefa feno kokoa). Afaka mahazo diplaoma amin'ny Zoom Apple Watch ao anatin'ny refy iray izay eo anelanelan'ny 1,2 sy 15 ary noho izany dia mila mampiasa ilay slide hitanao eo amin'ny efijery ianao.
Izao dia manana isika nampavitrika sy nanamboatra ny zoom ny Apple Watch, izay ho tianao be indrindra indrindra rehefa mampiasa rindranasa toa ny Sarintany ianao, andao jerena ny fomba fampiasana azy.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny Apple Watch
Raha te-hampandeha ny asan'ny zoom ianao dia afaka manao azy paompy indroa amin'ny rantsan-tànana roa eo amin'ny efijery. Manomboka eo dia afaka mampiasa ny Zoom ao amin'ny anao Apple Watch "Mikorisa" amin'ny rantsan-tànana roa eo amin'ny efijery, mitovy amin'ny ataonao amin'ny anao iPhone na iPad, na mampiasa ny Digital Crown. Amin'ny rindranasa sasany toy ny Maps, azonao atao ny mampiasa mivantana ny zoom avy amin'ny Digital Crown na ny manintona raha tsy mila manindry indroa amin'ny efijery ianao.
Ary ankehitriny avelako ho anao ity famintinana horonantsary faran'ny zava-drehetra ity izay efa hitantsika mba hamafana ny fisalasalana, 35 segondra fotsiny dia hitanao fa mora izany.
Ahm! Ary aza adino ny Podcast farany nataonay !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fampiasana ny zoom amin'ny Apple Watch
Ahoana ny fametahana cache cache amin'ny Discoverutil ao amin'ny OS X Yosemite